Community Organizing Part-2 – JQY's Blog
Analysis ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို လုပ်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအောက်ပါအချက်များအားသိထားရမည်။
What ပြဿနာက ဘာလဲ၊
Who ဘယ်သူတွေ ပါ၀င်ပတ်သက်နေလဲ
Why ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ
Whom ဘယ်သူတွေအတွက် လုပ်မှာလဲ
Root Cause ပြသ၁နာဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာက ဘာလဲ
Friends မိတ်ဆွေက ဘယ်သူတွေလဲ
Enemy ရန်သူက ဘယ်သူတွေလဲ
Situation အခြေအနေက ဘာဖြစ်နေပြီလဲ
Possibility ဖြစ်နို်င်ခြေ ရှိတာတွေက ဘာတွေလဲ
Connected ဘာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နေလဲ
When ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်မှာလဲ
Time Frame အချိန် ဘယ်လောက် ရသလဲ
Where/Location ဘယ်နေရာမှာ လုပ်မှာလဲ
How ဘယ်လို ဖြေရှင်းမှာလဲ……….
လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ် Community Organizing Process
1။ Target Group (ဦးတည်အုပ်စု)
2။ Issue (ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ)
3။ Objectives (ရည်ရွယ်ချက်)
4။ Strategy (နည်းဗျူဟာ)
5။ Approach (ချသ်းကပ်နည်း)
6။ Action (လုပ်ဆောင်ချက်)
7။ Evaluation (ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်)
1 ။Target Group (ဦးတည်အုပ်စု)
စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးတွင် မိမိဦးတည်စည်းရုံးမည့် လူထု ( community ) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိစည်းရုံးမည့်လူထုမရှိဘဲ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ၊ မိမိဦးတည်အုပ်စုသည်လည်း တိကျမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်၊ သို့မှသာ မည်သည့်လူတန်းစားအလွှာနှင့် မည့်သည့်လုပ်ငန်းအား လုပ်ဆောင်မည်ကိုသိရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက်ဟု ပြောဆိုရသည်မှာလွယ်ကူသော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အလွန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်ရပ်ကွက်၊ ဘယ်ကျေးရွာမှလူထု
ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်ရပ်ကွက်၊ ဘယ်ကျေးရွာမှ လူငယ် (သို့) ကျောင်းသား(သို့) အမျိုးသမီ(သို့) ကလေး(သို့) မိဘမဲ့ကလေး(သို့) သက်ကြီးရွယ်အို(သို့) ဒုက္ခိတများ စသဖြင့် တိတိကျကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျောင်းသားဟုဆိုရာ၌လည်း မူလတန်း၊အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား—စသဖြင့်တိကျရမည်။ သို့မှသာ ၄င်းတို့အတွက်အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် မလုပ်ဆောင်နိုင်၍ စိတ်အားငယ်စရာမလိုပါ မိမိကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နေသူ များလည်းရှိပါသည်။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာ လုပ်ဆောင်သွားခြင်းဖြင့် လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် လုပ်ဆောင်သွား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ပြသနာ အခက်အခဲဆိုသည်မှာ မိမိဦးတည်အုပ်စု အမှန်တကယ် ကြံုတွေ့နေရသော အမြန်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သော ဖြေရှင်း ပြေလည်သွားမှသာ မိမိဦးတည်အုပ်စုအတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်မည်ဖြစ်သော အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
3။ Objectives (ရည်ရွယ်ချက် )
ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာ အခက်အခဲများကို မိမိတို့ မည်သို့ဖြစ်စေချင်သည်၊ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်စေချင်သည် ဆိုသည့် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
4။ Strategy (နည်းဗျူဟာ )
မိမိတို့ရည်ရည်ရွယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်စေရန် မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုသည့်ကြိုတင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးများ တစ်ခုချင်းအောက်တွင် လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုသည့် အသေးစိတ်အစီအစဉ်များပါရှိသည်။
5။ Approach (ချဉ်းကပ်နည်း )
ဤအဆင့်သည် စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး ခက်ခဲသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် စကားပြောတတ်ဆိုတတ် ဟောပြောတတ်သော်လည်း မိမိဦးတည်စည်းရုံးမည့်လူထုအားမည်သို့ ချဉ်းကပ်ရမည်ကို မသိကြပေ၊ ထို့ကြောင့်မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကြား အပြန်အလှန်ရင်းနှီးမှု ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ မိမိတို့လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပါ၀င်လာမည်မဟုတ်ပေ၊ ဤအပိုင်းတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား အပြန်အလှန် ရင်းနှီးမှု ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ထားနိုင်မှသာလျှင် ဆက်ဆံရေးပြေလည်ပြီး မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါ၀င်လုပ်ဆောင် ပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းလုပ်မည်ဆိုလျှင် လူထုအား ချဉ်းကပ်မှုကို ပထမဦးစွာ အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
မိမိတို့ ရည်ရွယ်ထား ရည်မှန်းထားသော လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန်အတွက် ရေးဆွဲချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို အစီအစဉ်အလိုက် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်အကောင်အတည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးစီးသွားတိုင်း မိမိတို့၏လုပ်ငန်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ လုပ်ငန်းအားလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် အချိန်မည်မျှကုန်ခဲ့သနည်း၊ လူမည်မျှသုံးခဲ့ရသနည်း၊ ငွေမည်မျှကုန်ကျခဲ့သနည်း၊ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ မည်မျှပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သနည်း၊ မည်မျှလို မည်မျှပို စသဖြင့်သိရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သိရှိမှသာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည့်အခါ သည့်ထက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Community Organizer တစ်ဦး လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ
၁။ လူထုအား ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ စတင်၀င်မည့်အချက်ရှာခြင်း
ဤအချက်သည် လူထုစည်းရုံးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစပိုင်းအတွက် အခက်အခဲဆုံး အချက်ဖြစ်သည်။ လူထုမှ စည်းရုံးရေးမှူးအား စိတ်အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရန် ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းဆောင်များသည် လူထုကို ညွန်ကြားချက်ပေးလေ့ရှိပြီး လူထုက နားထောင်သူ သက်သက်သာဖြစ်သည်။ CO တစ်ဦးအနေဖြင့်ကတော့ လူထုထဲက လူတစ်ဦးလိုဖြစ်ဖို့ လိုသည်။ သူတို့နဲ့အတူ ထိုင်ပြီး သူတို့နဲ့အတူ စကားပြောဘို့လိုသည်။ အဲဒါမှသာ လူထုမှ မိမိအား ရင်းနှီးမှု ယုံကြည်မှု ရရှိလာပြီး လုပ်ငန်းကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။
၂။ ရပ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်အား ဆော်သြပေးခြင်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် လူထု၏ အခက်အခဲများကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သူဖြစ်သဖြင့် နားထောင်နေတဲ့သူလည်း မဖြစ်ရပါ။ မိမိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောထားအပေါ်တွင် အသက်ဝင်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူထုထံမှ အားကောင်းချက်များ ထွက်လာအောင် မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ခေါ်ဆောင်ရမည်၊ ထိုသို့ မေးမြန်းရာတွင် တစ်စုံတစ်ခုကို စစ်ဆေးမေးမြန်းသလို မလုပ်ရပေ၊ သို့သော် ပတ်ဝန်းကျင်လူထု၏ အခြေအနေများကို စူးစမ်းလေ့လာထားရန် လိုအပ်သည်။
၃။ ပြောင်းလဲမှုအတွက် နည်းဗျုူဟာများ ချမှတ်ခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်လူထုအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများ ပြဿနာများကို စတင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ သုံးသပ်လေ့လာခြင်း၊ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ လူတိုင်း သဘောတူနိုင်သည့် တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း ၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင် စည်းရုံးရေးမှုးတစ်ဦး အနေဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းဗျုူဟာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည်။
၄။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်း
ဤအဆင့်တွင် လူတိုင်းပါ၀င်လာနိုင်အောင် ဆွဲခေါ်ပေးရမည်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူထုမှ သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုအတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူနိုင်မည်။ အသေးစိတ် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို နေရာခွဲခြား ယူလာနိုင်မည်။ နောက်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် လူထုအတွက် တာဝန်ယူပြီး ဖြစ်သည်။ တိကျသည့် လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါ်က်လာမည်။
၅။ အဖွဲ့လိုက် ထူထောင်မှုများနှင့် တည်မြဲမှုများ ဖြစ်စေခြင်း
၄င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၆။ လေ့လာခြင်း ၊နားထောင်ခြင်း
တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ဒါမှသာ တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို သိရှိပြီး မိမိလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လူသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမနေနိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအားမှီခို၍နေထိုင်မှသာ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်စီမံခွင့်ကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း လူတစ်ဦးချင်းအပေါ်မှီခိုနေမှသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ရှာဖွေလျက်ရှိသော ယဉ်ကျေးမှုတန်ဘိုးကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနေထိုင်ပြီး အတူတကွစုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ စုပေါင်းနေထိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်ဖြစ်သည် စုပေါင်းနေထိုင်လိုစိတ်ရှိရုံနှင့်လည်းမပြီးသေးပါ အစုအဖွဲ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်လိုစိတ်လည်းရှိဘို့လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ လူသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သဟဇာတရှိရှိနေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်သည်၊ထိုသို့စုပေါင်းနေထိုင်ပြီး စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
အစုအဖွဲ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါလိုက်နာ ရမည့်အချက်များ
(၁) သူရဲ့ဆိုးကွက်ကို ကောင်းကွက်နဲ့ ယှဉ်ပြီးခွင့်လွှတ်ပါ။
(၃) အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ခံစားချက်ကို သိအောင်ကြိုးစားပါ။
(၄) သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိ လာပြီးဆိုလျှင် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်စုစည်းပါ။
(၆) တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးယုံကြည်မှုထားပါ။
စည်းရုံးရေးမှုးတစ်ဦးသည် မိမိလူထုနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ရန်လိုအပ်သည် သို့မှသာ မိမိပေးလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအား မိမိလူထုကြားသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတအသစ်များတိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတအသစ်များတိုးပွားလာမှသာ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိမည်ဖြစ်သည်။ တပြိုင်တည်းမှာပင် စည်းရုံးရေးမှူးအနေဖြင့်လည်း မိမိလူထုထံမှ ၎င်းတို့၏ သဘောထားအမြင်များ၊ အကြံဉာဏ်များ၊ ၎င်းတို့ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်လိုမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏အခြေအနေများကိုသိရှိရမည်ဖြစ်သည််။ ထို့ကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးသည် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
CO Communication Process
ကြားခံပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း (Creative Media)
စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးသည် မိမိလူထုအကြားတွင် စည်းရုံးရေးလုပ်မည်ဆိုပါလျှင် ကြားခံပစ္စည်းများကို သင့်လျှော်သလို အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိဦးတည်စည်းရုံးမည့်အုပ်စုသည် ဘာသာစကား၊ စာပေဗဟုသုတ အားနည်းသူများ၊ အားသာသူများစသဖြင့် အဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုး၊ အလွှာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိပေးလိုသော၊ ပြောလိုသော၊ ရည်ရွယ်လိုသော အကြောင်းအရာများကို ၄င်းတို့အလွယ်တကူ မှတ်မိသိရှိရန်အတွက် ၄င်းတို့နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေရှိမည့် ကြားခံပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Why we use Media? ဘာကြောင့် ကြားခံပစ္စည်း အသုံးပြုရသလဲ
Communicate better ဆက်သွယ်မှုပိုကောင်းအောင်
Easy to understand နားလည်လွယ်အောင်
Easy to remember ပိုမှတ်မိလွယ်အောင်
Have fun, interesting စိတ်ဝင်စားမှု ရှိအောင်၊ ပျော်ရွင်အောင်
Friendlier, fellowship ရင်းနှီးခင်မင်မှု ဖြစ်အောင်
For effective learning & sharing ထိရောင်သော သင်ယူမှု ၊ဆွေးနွေးမှုဖြစ်အောင်
လူထုကို စည်းရုံးရေးလုပ်မည်ဆိုလျှင် သတိထားသင့်သည့်အရာများ
လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လူထုအားစွမ်းရည်မြင့်တက်လာစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးအနေဖြင့် လူထုအား စွမ်းရည်မြင့်တက်လာအောင်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါတို့ကို သတိထား လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၁ – Ignore မသိသေးတဲ့အပိုင်း
၂ – Understandings သိပြီးသောအပိုင်း
၃ – Resistance ခုခံသော အပိုင်း
၄ – Change ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်း
တို့ပါ၀င်သည်။ ၄င်းတို့အား မိမိလူထုကြားတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆင်ပြေပြေ သဟဇာတရှိရှိ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဆိုပါလျှင် မိမိလုပ်ငန်းအောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။
Community Organizing Cycle ( Frame )
လူထုစည်းရုံးရေး သံသရာ လည်ပတ်ခြင်း
၁- လူထုနှင့်စတင်ပါ (start from the people )
၂- လူထုအားစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လာအောင်ကူညီပေးပါ (Help make them Thinking)
၃- အားလုံးသဘောတူ လက္ခံသော အခြေအနေရအောင်လုပ်ဆောင်ပါ (Analyzing together & Establishing common understanding )
၄- အတွေ့အကြုံ အသစ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါ (New awareness —attitude, Knowledge —etc)
၅- အတူတကွ အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်ပါ (Action together)
၆- ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း (Evaluation & Prepare for Future plans)
Identify Issue (သူတို့ပြသနာတွေကို ရှာဖွေ)
Discuss themselves (သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးမှုလုပ်လာအောင် လုပ်ပေး)
Take own initiatives (သူတို့ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်မှုပြုလုပ်)
Analysis problem (ပြသနာကို သုံးသပ်)
Meeting/ talking with people ( အစည်းအဝေး၊စုဝေးခြင်း ၊လူတွေနဲ့ စကားပြောခြင်း)
Bring the together / organized ( အားလုံးကို အတူတူ စုစည်းမှု ပြုလုပ်ခြင်း)
Develop trust / understanding ( နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု တိုးမြင့်ခြင်း)
Use of media (လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြားခံ မီဒီယာ အသုံးပြုခြင်း)
Solve problem on the own ( မိမိ ပြဿနာကို မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းခြင်း)
Understand start local culture ( ဒေသဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ခြင်း)
All human Rights/ Women rights (လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံရန်)
Strategy/ Long term vision ( ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ် ရှိခြင်း)
Develop Local CO (ဒေသခံ စည်းရုံးရေးမှုးများ မွေးထုတ်ခြင်း)
CO reflection / evaluation ( ပြန်လည် သုံးသပ်ရှုမြင်ခြင်း)
Facilitation/ Participatory Methodology ( စေ့စပ်ဆော်သြပေးခြင်းနှင့် အားလုံးပါ၀င်နိုင်သော နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်း)
Know Yourself ( မိမိ အခန်းကဏကို မိမိ ကိုယ်တိုင် သိရှိခြင်း)
Approach the people – Entry point ( လူထုကို ချဉ်းကပ်ရန် ၀င်ပေါက် ရှာခြင်း)
အထူးမှတ်ချက်။ ။ အမည်မသိသူ ရေးသားထားသည့် document တစ်ခုမှ ကူးယူတင်ပြသည်။